Andriandoriamanjaka - Wikipedia
Ny Andriandoriamanjaka dia iantsoana ireo zana-dRabefaravolamanjaka tamin'Andrianamboninolona zanak'Andriamananitany. Misy valo ireo Andriandoriamanjaka zana-dRabefaravolamanjaka tamin'Andrianamboninolona saingy ireto anarana efatra ireto no voatazon'ny lovantsofina matetika dia Andriandambotanimanjaka sy Ravolarivomanjaka sy Andriamasoandrobe ary Andriatsitakatrarivo.
Rabiby tamin'ny taona 1500 no mpanjaka arabo jiosy teo Ambohidrabiby ary nanan-janaka telo ka ny vavimatoa dia Rabefaravolamanjaka ary ny vavy aivo dia Ramaintsoanala (niova anarana ho Randapavola).
Nisy vady namboarina roa teo Ambohidrabiby tamin'ny nanjakan-dRabiby. Raha tonga hangataka an-dRabefaravolamanjaka i Andriamanelo mpanjakan'i Alasora dia Randapavola no nomen-dRabiby ho vadiny fa Rabefaravolamanjaka kosa nomeny ho vadin'Andrianamboninolona, zanak'Andriamananitany.
Ny Andriandoriamanjaka dia iantsoana ireo zana-dRabefaravolamanjaka tamin'Andrianamboninolona zanak'Andriamananitany. Misy valo hoy ny lovantsofina no isan'ireo Andriandoriamanjaka zana-dRabefaravolamanjaka tamin'Andrianamboninolona saingy ireto anarana efatra ireto no voatazon'ny lovantsofina matetika dia Andriandambotanimanjaka (natao hoe Ratany), Ravolarivomanjaka (na Ravolana), Andriamasoandrobe (na Ramasoandro na Andriambe) ary Andriatsitakatrarivo (na Ratsitakatra). Ao an-tampon'ilay tendrombohitra avo voahodidina hadivory eroa ampita avaratra antsinanan'Ambohidrabiby, atao hoe Ambohitrandriananahary, no namponenin-dRabiby an-dRabefaravolamanjaka sy ireo zanany ary ao Rabefaravolamanjaka no miafina. Vadiben'Andrianamboninolona i Rabefaravolamanjaka ka matetika Andrianamboninolona no mipetraka maharitra eo amin-dRabefaravolamanjaka ka nahavery ny anaran'io tendrombohitra io ho Ambohitrandriananahary, anarana nalain'Andrianamboninolona tamin' Ambohitrandriananahary, vohitr'Andriamananitany rainy eo ampita avaratr'Alasora.
Nisy fotoana narary mafy ny mpanjaka Rabiby teo Ambohidrabiby ary saika maty mihitsy nefa dia tsy noraharahain'ireo zanany izy. Fa ireo zana-dRabefaravolamanjaka no nikarakara sy nahasitrana azy. Koa rehefa sitrana Rabiby dia hoy ny teniny mantsy ireo zana-dRabefaravolamanjaka ireo: "Tsy mba zafiko ianareo fa toy ny zanako naterako, fa ny zanako tsy nahavita izay vitanareo".
Rehefa hiamboho Rabiby dia nijery izay taranany handimby azy amin'ny fanjakany ka niantefa tamin'ny zanaka lahin-dRabefaravolamanjaka tamin'Andrianamboninolona ny safidiny. Koa nampiantsoin-dRabiby ny zanaka lahimatoan-dRabefaravolamanjaka tamin'Andrianamboninolona ka izao no teniny taminy: "Efa hiamboho aho ity ka ianao no homeko ny fanjakako". Dia hoy io zana-dRabefaravolamanjaka io: "Aleo izahay ho toy izao ihany". Dia nalahelo mafy Rabiby sy ny vahoakany tamin'izany. Fa rehefa nandà io zanakandriana io vao notendren-dRabiby hanjaka Ralambo zafiny. Tsy afaka nanjaka arak'izany Ralambo raha tsy nandà fanjakana ireo zana-dRabefaravolamanjaka. Koa ho fankasitrahana, dia izao no tenin-dRabiby sy Ralambo mantsy ireo zana-d Rabefaravolamanjaka ireo: "Eny ary, aoka ianareo sy ny zanaka amam-paranareo ho amin'izao maha zanakandriana anareo izao mandrakizay mahazo manjaka ; ary tsy tsindrian-kazo lena ianareo fa izay manao ratsy anareo sy ny zanaka amam-paranareo dia atao maty tokoa, ary ny taranakareo sy izay zanaka amam-paran'ny manjaka amin'ity tany ity no iray lamba ka izay itafianareo sy ny taranakareo no itafian'andriamanjaka mifandimby sy ny ankohonany, koa ny zanaka amam-paranareo eto Ambohidrabiby no manenona ny lamban'andriamanjaka fa ny Andriana tsy mitafy ny jaky tenominareo dia tsy manjaka. Ary izao teninay izao dia tsy ovain'iza manjaka amin'ity tany ity na oviana na oviana". Koa izany kabarin-dRabiby sy Ralambo izany no nahatonga ny Andriandoriamanjaka ho andriana avo firazanana indrindra amin'ny samy andriana raha nanao ny antanantohatr'andriana ny mpanjaka Ralambo. Ary ny anarana "Rabefaravolamanjaka" aza hono dia vao nomen-dRabiby sy Ralambo tato aoriana ho firaketana hatrany fa ireo taranak'io vavimatoan-dRabiby io tamin'Andrianamboninolona dia zanakandriana ny firazanany ary manana zo hanjaka. Ravolarivomanjaka sy Andriamasoandrobe anefa dia niala teo Ambohidrabiby mba hitady tany hanorenana fanjakana ka nianavaratra nankany Anjozorobe sy niakandrefana any Itasy sy Ivonizongo ary nifanambady tamin'ireo andriana tany ka lasa razan'andriamanjaka tamin'ireo faritra ireo. Avy amin'izy ireo ny razan'andriana nanjaka tao Andavakisakay tany Anjozorobe sy ireo Ampanarifito sy Andriamborona tany Imamo. Izany hoe taranaky ny mpanjaka Rabiby sy Andrianamboninolona koa ireo andriana tao Anjozorobe sy tany Imamo sy Vonizongo. Ireo Andriandoriamanjaka hafa koa dia nisy nitady fanjakana tany amin'ny faritany atsimon'Imerina tamin'ny nanjakan-dRalambo sy Andrianjaka ka tonga razan'Andriana amin'ny foko andratsay sy betsileo. Andriandambotanimanjaka kosa dia nijanona teo Ambohidrabiby ary nanambady ny anabavin'Andriampolofantsy ao Antsomangy. Rehefa niamboho Andriandambotanimanjaka, sy araka ny hafatry ny mpanjaka Rabiby, dia natao mitohy amin'ny fasan'ny mpanjaka Rabiby mivady ny fasany ka milahatra avy avaratra mianatsimo Rabiby, Ramaintsoakanjo ary Andriandambotanimanjaka. Ny filahatry ny fasan'andriana eo amin'ny rovan'Ambohidrabiby dia mirakitra fa na dia mpanjaka nalaza aza Ralambo, dia tsy mihoatra an-dRabiby sy ireo Andriandoriamanjaka. Satria tokoa, ny fasan-dRalambo mivady dia tsy ahazo natohy tamin'ny fasan-dRabiby mivady sy Andriandambotanimanjaka. Eo atsimon'ny fasan-dRabiby sy Andriandambotanimanjaka koa no misy ny fasan-dRalambo sy ny vadiny, maneho izany fa nm Mpanjaka Rabiby dia nanao fandaminana teo Ambohidrabiby ka na dia nanaraka an-dreniny teo aza Ralambo dia tsy maintsy nanaraka ny fomban-tany sy ny fiandrianana izay efa napet-di Rabiby.
Ary ankoatra izany, ireo Andriandoriamanjaka zana-drahavavin-dreniny ihany no nataon-dRalambo ho lehiben'ny mpanolotsainy teo Ambohidrabiby noho izy ireo malaza ho marani-tsaina sy nitana ny fomban-dRabiby, koa ny tolokevitr'izy ireo no narahin'ny mpanjaka Ralambo ka nahateraka teo Ambohidrabiby ny fanjakana merina lehibe sy nipoiran'ny fomban'andriana maro tsy tambo isaina toy ny teti-razana sy ny fandroana, sns.
Araka ny lovantsofina voalaza etsy ambony, na dia taranak'Andrianamboninolona aza ny Andriandoriamanjaka dia tsy mba natao ho Andrianamboninolona ny firazanany fa nataon-dRabiby sy Ralambo ho "zanakandriana" sy "mahazo manjaka mandrakizay".
Tsy voafaritra mazava kosa na ilay firazanany "zanakandriana" no manana toetra "doria" na ilay "manjaka". Ny teny hpe doria moa dia teny semitika sy teny hebreo, izay manana heviny efatra dia "taranak'andriana" no heviny amin'ny foko sakalava, "vary akotry voafantina fanao masomboly" no heviny amin'ny foko antemoro taranak'arabo, ary "mandrakizay" sy " tsy miova" ary "alao valo" no saika heviny aty afovoantany. Tamin'ny andron-dRabiby sy Ralambo, ireo andriamanjaka, ireo renin-Andriamanjaka ary ireo zanak'Andriana mahazo manjaka no manana zo hitondra ny teny hoe manjaka amin'ny anarany. Ireo vadikelin'andriana na zanak'andriana nefa tsy manjaka dia tsy mahazo izany. Teo Ambohidrabiby tamin-dRalambo dia Ratsitohinamanjaka (renin'Andrianjaka), Andrianjaka (zanakandriana mahazo manjaka), Rabefaravolamanjaka ary ireo Andriandoriamanjaka no hany nahazo nitondra izany anarana hoe manjaka. Ny fisian'io teny hoe manjaka io dia mampiseho indray ny rohim-pihavanana tena mifanakaiky izay misy amin'ny mpanjaka Ralambo sy ireo Andriandoriamanjaka ary maneho koa ny maha-zanakandriana mahazo manjaka ny Andriandoriamanjaka.
Arak'izany, ny teny hoe andriana sy doria ary manjaka (mitambatra ho andriandoriamanjaka) dia mifameno sy tsy afa-misaraka ka ny fanasarahana azy na ny fanadinoana ny iray amin'ireo teny telo ireo dia handiso tanteraka ny hevitra fonosin'ny teny hoe andriandoriamanjaka.
Rehefa nitety razana teo Ambohidrabiby ny mpanjaka Ralambo dia natazominy ho "zanakandriana mandrakizay doria mahazo manjaka" ny firazanan'ireo Andriandoriamanjaka. Izany hoe mitovy firazanana amin'ny zanaka mahazo manjaka nateraky ny andriamanjaka ny firazanan'ireo Andriandoriamanjaka.
Nataon'ny mpanjaka Ralambo ho manan-tantara ny Andriandoriamanjaka ka izy ireo no nataon'ny mpanjaka Ralambo ho mpanenona ny jaky itafiana sy ifonosan'ny mpanjaka merina sy ny vady aman-janaky ny mpanjaka. Etsy andaniny, ny Andriandoriamanjaka dia tsy mitafy sy mifono afa-tsy ireo landy notenominy. Izany dia araka ilay tenin'ny mpanjaka Ralambo tamin'ireo Andriandoriamanjaka manao hoe: "Isika izao no iray lamba, izay itafianareo no itafiako". Ny an'ny Adriamanjaka anefa dia jaky fa ny an'Andriandoriamanjaka kosa dia mena mitsoriaka volombolamena na volombarahina ny lokon-damba itafiany na ifonosany.
Rehefa nilamina ny tany dia nanao fizaran-tany teo amin'ny vohitr'Ambohidrabiby renivohim-panjakany koa ny mpanjaka Ralambo ka natokany ho zara-tanin'ny Andriandoriamanjaka ny faritra rehetra avaratry ny lapany ao amin'ny vohitr'Ambohidrabiby, ny avaratry ny rova ao Ambohidrabiby; ny vakin-kady avaratra amin'ny vohitr'Ambohidrabiby ary ny ambany avaratra rehetra amin'ny vohitra Ambohidrabiby dia Anelakelabohitra ka hatrany Fonohasina, Ambohitrakely, Ambatonandriamangalanitra, Ambohidava, Amparafara, sy ny havoana Ambohitrandriananahary eroa avaratra antsinan'Ambohidrabiby. Eo Ambohidrabiby amin'ny avaratry ny rova no zaratany foibe iombonan'ny Andriandoriamanjaka rehetra, avy eo no niparitaka eraky ny lafivalo ireo Andriandoriamanjaka, nisy nankeo Fonohasina sy Ambohibao Atsimo sy maro hafa. Nisy Andriandoriamanjaka nonina teo Ambohidrabiby amin'ny avaratry ny rova hatramin'ny mpanjaka Rabiby mandrak'ankehitrio. Voalazan'ny lovantsofina fa ny tranokoton'ireo Andriandoriamanjaka teo Ambohidrabiby dia miavaka tokoa satria avo noho ny tranokotona tao androvan'Ambohidrabiby. Tsy mba nahazo zara-tany lavitra an'Ambohidrabiby toa an'Andriantompokoindrindra na Andrianamboninolona na Andriandranando ny Andriandoriamanjaka. Fa nomen-dRalambo ny Andriandoriamanjaka kosa ny vakin-kady avaratra amin'ny vohitr'Ambohidrabiby noho ireo Andriandoriamanjaka zanakandriana mahazo manjaka ny firazanany no taranak'Ambohidrabiby rahateo. Ary tsy misy foko na fianakaviana nahazo vakin-kady teo amin'ny vohitr'Ambohidrabiby afa-tsy ny Andriandoriamanjaka. Tantara nataon-dRalambo mipetraka hoan'ny Andriandoriamanjaka izany. Ny fantsakan'andriana miisa roa eo Ambohidrabiby dia amin'ny zara-tanin'ny Andriandoriamanjaka avokoa no ahitana azy dia ilay ao ambany avaratra antsinanan'ny vohitr'Ambohidrabiby ao Andohamandry Ankasina sy eo ambany avaratr'Ambohitrakely eroa avaratr'Ambohidrabiby. Ireo fantsakana roa ireo dia natokana hakana ny rano hampiasain'ny mpanjaka sy ny ankohonany ary ny Andriandoriamanjaka, sy hanasana ny lamban'izy ireo fa tsy misy olon-kafa ankoatr'izy ireo afaka mampiasa ny rano antsakaina ao.
Voatanan'ny lovantsofina fa nisy kosa Andriandoriamanjaka, noho izy andriana mahazo manjaka, nangataka tso-drano tamin'ny mpanjaka Ralambo mba hitady zara-tany hanjakany fa tsy tiany ny hanoa. Notsofin'ny mpanjaka Ralambo rano izy ireo hahazo fanjakana ka lasa niakandrefana sy niantsinana sy nianavaratra ary nianatsimo ka lasa razan'andriana nanjaka tamin'ny faritra izay nandehanany. Tamin'ny niakandrefana dia nisy ny fitazomana fihavanana teo amin'ny mpanjaka Ralambo sy Andriambahoaka koa nampifanambadiana ny fianakavian'izy ireo koa nisy Andriandoriamanjaka nanambady ny taranak'Andriambahoaka koa mbola ao avaratr'i Manazary ny anaran-tanàna atao hoe Fonohasina vohitra nitoeran'ny taranak'izy ireo ary izany dia misy ifandraisany amin'ny tantaran'ny fanenomana landy tao Imamo sy ny tenona lamba landy nataon'Andriandoriamanjaka teo Ambohidrabiby ary ny maro tamin'ny andriana nanjaka tamin'Imamo dia taranak'Andriambahoaka sy ny Andriandoriamanjaka, isan'izany ny Ampanarifito sy Andriamborona. Ny taranak'Andriambahoaka koa dia nisy nafindra monina taty Imerina koa tao Antsomangy nampifanambadiana tamin'ny terak'Andriampolofantsy. Fa Andriampenovola isan'ny taranaky ny Andriandoriamanjaka sy Andriambahoaka no tompon'ny vohitr'Ambohibe, akaikin'Ambohibeloma any avaratr'Arivonimamo ary ny taranany dia mitonona ho Andrianamboninolona tato aoriana. Misy Andriandoriamanjaka koa nifindra monina any Vonizongo koa Fonohasina no anaran'ny vohitra misy azy ireo any. Tamin'ny niantsinanana kosa dia namponenin'ny mpanjaka Ralambo teo Ambohimifangitra koa ny Andriandoriamanjaka koa nifanambady tamin'ny terak'Andriantompokoindrindra ao Ambohimalaza, saingy tamin'ny taonjato faha-18 dia leo monina teo Ambohimifangitra ny taranak'izy ireo koa nifindra monina nianatsimo tany avaratr'i Fianarantsoa, koa ao Sahambava avaratr'i Fianarantsoa dia misy foko atao hoe Andriandoria ary Ambohimalaza no anaran'ny vohitra misy azy ao. Koa tsy misy Andriandoriamanjaka intsony ao Ambohimifangitra. Tamin'ny mpanjaka Andrianjaka dia nisy Andriandoriamanjaka teo Ambohidrabiby no nifindra monina lasa tompon'ny vohitr'Ankadimanga ary nifanambady tamin'ny terak'Andriampolofantsy tao Ambohimanarivo, saingy tato aoriana tamin'ny taonjato faha-18 dia leo monina teo Ankadimanga ny taranak'izy ireo koa nandao an'Ankadimanga ary niverina teo Fonohasina sy Ambohibao Atsimo. Koa tsy misy taranany intsony ao Ankadimanga. Tamin'ny nanjakan'Andrianjaka (1610-1630) dia nisy tamin'ireo Andriandoriamanjaka nonina teo Ambohidrabiby no nifindra nonina nianavaratra amin'ny faritra Anjozorobe iny ka nanorina ny vohitra Ambohibao Atsimo ary nifanambady tamin'ny terak'Andriamamilaza nanjaka tamin'iny faritra avaratr'Imerina iny mba hitazona ny fihavanana eo amin'ny fanjakan'Imerina sy ny fanjakan'ny terak'Andriamamilaza. Ny hoe Ambohibao aza hono dia avy amin'ny hevitra hoe "vohitry ny bao", ny bao izay fitaovana ampiasain'ny mpanenona lambamena, ka ny Ambohibao dia maneho fa io vohitra io no renivohitry ny tenona lambamena tamin'izany fotoana izany.
Nisy sasany tamin'ireo Andriandoriamanjaka nonina teo antampon'Ambohidrabiby kosa no nafindran-dRalambo honina eo amin'ny tehezan'ny vohitra Ambohidrabiby eo avaratra antsinanana amin'ilay toerana atao hoe Fonohasina ankehitrio mba ho fahatsiarovana fa io toerana io no nanafenan-dRabiby raibeny ny hasin'ny fanjakany sy ho fitadidiana fa tsy mba noraisin-dRabiby ho zafiny fa toy ny zanany ireo Andriandoriamanjaka ary ho firariana fa ny zanakandriana mandrakizay no hanjaka amin'ny tany sy ny fanjakana. Amin'izany, teo Fonohasina dia tsy mba nisy fantsakana fa miray fantsakana amin'ny mpanjaka Ralambo sy ny ankohonany izy ireo amin'ny maha zanakandriana mahazo manjaka azy ireo dia amin'ilay fantsakan'andriana eo ambany avaratra antsinanan'ny vohitr'Ambohidrabiby, ao Andohamandry, no hakan'ny angara na mpanompo ny rano handrahoana ny sakafon'ireo Andriandoriamanjaka teo Fonohasina, ka vizaka eroa hono ireo angara mitaon-drano teo. Manaraka izany, nisy Andriandoriamanjaka no nahazo zara tany tao Isahafa tamin'ny mpanjaka Andriatsitakatrandriana ary tato aoriana dia nasain'ny mpanjaka Andriamasinavalona hisafidy na ho isan'ny Andriamasinavalona na ho isan'ny Andriandoriamanjaka izy ireo koa nisafidy ny ho Andriamasinavalona. Tamin'ny mpanjaka Andrianjaka na Andriamasinavalona na Andrianampoinimerina dia nahazo zaratany teo Ambohitsoa ao akaikin'Andohalo amin'ny vohitr'Antananarivo ny Andriandoriamanjaka ary mbola misy taranany ao mandrak'ankehitriny.
Ny Andriandoriamanjaka teo Ambohidrabiby sy Ambohibao atsimo sy ireo andriana nanjaka teo Ikaloy , hatramin-dRabiby ka hatramin'Andrianampoinimerina, dia fianakaviana iray ihany ka nifanambady ka raha ny Andriandoriamanjaka no makany Ikaloy dia tompony tsy mangataka ny atiny izy. Tsy nahagaga ary raha teo amin'ny Andriandoriamanjaka no notazomin'Andrianampoinimerina ny mpanjakan'Ambohibeloma Avaratra ka mbola ao Fonohasina ireo taranany mandraka ankehitriny ary nifanambady tamin'Andriandoriamanjaka teo. Toy izany koa, raha vao nanjaka Andrianampoinimerina dia nampiakatra Andriamasinavalona avy any Ikaloy izay nalaza tamin'ny fanandroana. Rehefa voavory Imerina dia nasain'Andrianampoinimerina nifidy tany honenany io Andriamasinavalona io anefa tsy mifanalavitra amin'Ambohimanga. Koa teo antampon'Ambohidrabiby amin'ny ilany avaratra no nonina io Andriamasinavalona satria izany no zara-tanin'Andriandoriamanjaka ary teny Fonohasina kosa izy no nanorina fasana.
Fady ny lahy amin'ny Andriandoriamanjaka ny mampody vady misintaka ary tsy mampody vady misintaka izy. Misy koa amin'ireo vehivavy Andriandoriamanjaka no tsy manara-bady raha miamboho fa misafidy afenina amin'ny fasan'ny ray aman-dreniny ihany.
Nanomboka tamin-dRabiby ka hatramin-dRanavalona III dia ny Andriandoriamanjaka teo Ambohidrabiby sy Fonohasina hatrany no mpanenona ofisialy ny lamban'andriamanjaka rehetra nifandimby taty Imerina, toy ny jaky, sy hakana ny soherina ilaofan'ny andriamanjaka sy ny ankohonany, na dia maro aza ireo andriana nahay nanenona. Arak'izany, ireo Andriandoriamanjaka ihany no nitafy sy nifono ny lamba landy mitovy karazana amin'ny an'Andriamanjaka sy ny ankohonany. Landibe ary tato aoriana niampy landikely no notenomin'ny Andriandoriamanjaka. Tato aoriana dia mba nataon'ny mpanjaka Andrianjaka ho mpandrary ny tsihy fanao amin'ny trano masina ireo taranany. Izany no nahatonga ilay tenin'ny Ntaolo manao hoe: "Ny lamban'Andriana an'Andriandoriamanjaka, ny tsihin'Andriana an'ny zanak'Andrianjaka, ka samy manana ny hanitra ho azy".
Ny Andriandoriamanjaka teo Ambohidrabiby koa no mpitazona ny hasin'ny fanjakana merina ka miseho amin'ny endrika telo loha izany: voalohany, eo Fonohasina, zoro alahamadin-tanin'Ambohidrabiby no nafenin-dRabiby ireo lefom-pohy volamena miisa valo maneho ny hasin'ny fanjakany amin'ny lafivalon'ny Nosy. Faharoa, ny Andriandoriamanjaka eo Ambohidrabiby sy Fonohasina no manenona ny lamban'Andriamanjaka rehetra taty Imerina sy ny lamba ifonosan'ny Andriamanjaka. Ary farany, ny tendrombohitra ampita avaratra amin'ny alahamadintanin'Ambohidrabiby dia zara-tanin'ireo Andriandoriamanjaka, ary izany tendrombohitra izany dia Ambohitrandriananahary no anarany ka isan'ny heverin'ireo Andriandoriamanjaka ho vohitr'andriana masina koa.
Tamin'Andrianampoinimerina nanao fizaran-tany teo Ambohidrabiby dia nomeny ny Andriandoriamanjaka hatrany ny avaratry ny lapa, ny vakin-kady avaratra ary ny ambany avaratra amin'ny vohitr'Ambohidrabiby.
Tamin' Andrianampoinimerina nanao fizaran-tany teo Antananarivo dia ny Andriandoriamanjaka no isan'ireo foko andriana vitsy nomeny zara-tany tamin'ny faritra voahodidina hadivory teo Andohalo Antananarivo.
Tao aorian'ny fanafoanan'ny mpanjanatany ny firazanana taty Madagasikara dia "taranak'andriana" sisa no nisy fa ny Andriandoriamanjaka ihany no nijanona ho "zanakandriana" satria efa nataon-dRalambo hifamatotra mandrakizay amin'ireo Andriandoriamanjaka izany sata izany. Teo amin'ny finoana jiosy sy kristiana ary silamo kosa dia tokana ihany ny "manjaka mandrakizay doria" dia Andriamanitra Andriananahary izany, toa manome mistery tanteraka ny momba ny Andriandoriamanjaka.
Ny Andriandoriamanjaka dia manana fomba miavaka:
Hoy ny fitenenana: "Ny Andriandoriamanjaka toy ny landim-boatavo ka raha zahana iray fototra ihany", izany dia fandalàna ny fahendren'ireo razany dia ny "tsy misara-mianakavy" izany. Nefa mifanambady amin'ny andriana hafa koa ny Andriandoriamanjaka raha mivoaka ary voatanan'ny lovantsofina manokana ny fifanambadiana efa hatramin'ny mpanjaka Ralambo sy Andrianjaka nisy teo amin'ny Andriandoriamanjaka sy ny andriana any Anjozorobe, ny Andriandoriamanjaka sy ny terak'Andrianamboninolona, ny Andriandoriamanjaka sy ny terak'Andriampolofantsy ao Atsomangy; ny Andriandoriamanjaka sy ny Zanadralambo tao Amboniloha ary ny Andriandoriamanjaka sy ny terak'Andriambahoaka any Manazary Imamo. Tsy mety aminy ny manambady tsy andriana indrindra fa ny mpanompo;
Tsy "mifamaky taolana" ny samy Andriandoriamanjaka;
Mifampiarahaba "Tsarava tompoko!" ny samy Andriandoriamanjaka.
"Hafenina" fa tsy "handevina" akory no voambolana fampiasa raha misy Andriandoriamanjaka niamboho (nodimandry) ka hampidirina am-pasan-drazana ary izany dia fahendrena voarakitra hatry ny ela misy ifandraisany amin'ny anaran-tany hoe "Fonohasina"
Tsy mamadika fa mamono razana raha misokatra ny fasana, ary maro amin'ireo razany no tsy azo kitihina mihitsy, ao Fonohasina ohatra dia tsy misy fasam-bao mihitsy mandrak'ankehitrio, fa fasana efa tamin'ny taonjato faha-19 na talohan'izany no ao;
Tsy tia mikasika faty koa ny Andriandoriamanjaka koa raha misy fahoriana dia tsy mamoaka ireo fiasàny andavanandro izy hikarakarana izany fa aleony mividy; misasa sy misolo akanjo vao miditra an-trano raha avy any am-paty; amin'izany dia efa voaomana eto alatrano ny akanjo hisoloana rehefa avy nandro, izay vao miditra ao an-trano;
Fahizay, dimy ireo sampin'Andriandoriamanjaka dia Rabefaravolamanjaka, Ramaintsoakanjo, Andriamitetirihana, Ralavasatroka ary Andriatsitakatra. Tsy mba tapakazo ny sampin'Andriandoriamanjaka fa saika ireo razambeny niana tamin'ny taonjato faha-16. Amin'izany, Rabefaravolamanjaka no sampy manokan'Andriandoriamanjaka ary Rabefaravolamanjaka no lehibe indrindra amin'ireo dimy ireo sy antsoiny voalohany raha mivavaka. Ramaintsoakanjo moa dia reniben'Andriandoriamanjaka no vadin'ny mpanjaka Rabiby, Andriamitetirihana mpanjaka any Anjozorobe ary Ralavasatroka, mpanjakan'ny foko Antavaratra tamin'ny taonjato faha-16. Vakoka no iantsoany ireo sampy dimy ireo izay heveriny ho toy ny lova. Ny vakana sy hazo nomen'ireo razambe dimy ireo no nofonosina landy mena sy notehirizina nifandovan'ny taranak'Andriandoriamanjaka tsirairay avy ary izy ireny dia samy mitondra ny anaran'ireo razambe dimy ireo. Mifamatotra amin'Ambohitrandriananahary, havoana eroa ampita avaratra antsinanan'Ambohidrabiby ny momba ny sampin'Andriandoriamanjaka, ka izany havoana izany dia lovabe (harena ara-kolontsaina) an'ny Andriandoriamanjaka tsy mialonjafy tsy ifampizarany amin'ny foko hafa ny fitahirizana ireo vakoka ireo, antony iray anaovany ny lova tsy mifindra;
Rehefa tonga ny tsinan'Alahamady dia mamono ondry tokambolo miloko mena izy ary ny tsinan' Alakaosy tsy misotro rano ary mifady hanina ny maraina mandra-paharivan'ny andro (tsy mamoaka fiasana koa izy amin'izany fa dia mipetraka matory any an-tranony avy). Ny hariva maty masoandro vao manao lapabe izy ireo. Ny vody alahamady sy vody alakaosy dia atety amin'ny fasana maro eo Fonohasina ny ran'ondry menavolo. Fady raha mpanompo no mikabary na manao hataka eo amin'ireo fasan'Andriandoriamanjaka. Tsy maintsy olompotsy no afaka manao hataka amin'ireo fasany.
Amin'ny faritr'Ambohidrabiby, ny Andriandoriamanjaka ihany no fady mihinana hena poaraka izay antsoiny hoe "hena ratsy" na hena omby novonoina na novidiana hatao laoka rehefa misy fahoriana. Tsy mampiakatra izany hena omby izany an-tanàna na mampiditra izany an-trano ny Andriandoriamanjaka, ka na ny vilany sendra nandrahoana izany hena omby izany aza dia ariany.
Fady kisoa sy tongolo ny vohitra misy ny Andriandoriamanjaka ka mbola maro no mitazona izany fady izany. Fadin-drazan'ny Andriandoriamanjaka kosa ny mihinana kisoa, vano, sokina, anatarika, ny masontanteliny amin'ny hena, ny voankena, ny arinkena, ny amalombandana, ny tongologasy sy maro hafa, koa mbola maro no mifady izany ankehitrio.
Fony faha-mpanjaka, ny Andriandoriamanjaka dia mitafy lambalandy mirebareba amin'ny tany amin'ny andavanandro, na ankafaliana na ankaratsiana, koa "Ny be lamba " no anarana niantsoan'ny olona azy ireo;
Ny Andriandoriamanjaka rehefa nodimandry dia tsy mifono afa-tsy lambalandy notenomin'Andriandoriamanjaka ihany. Koa fony fahavelony sy raha vao afaka mihary harena dia efa mitahiry anaty saronankarona eo amin'ny zoro alahamady ao antranony izay lambalandy hifonosany rahatrizay ny Andriandoriamanjaka tsirairay na lahy na vavy, Vita amin'ny landibe ary misy natao tamin'ny landikely ireny lambalandy hifonosan'ny mpanjaka merina sy ny Andriandoriamanjaka. Tsy azo amidy na atakalo na omena olona na kasikasihina izany lamba lambalandy notahirizina izany, ny isany anefa dia azo ampiana. Heverin'ny Andriandoriamanjaka fa mitondra fahasoavana ho azy ny fitehirizana an-trano izany lambalandy hifonosany izany. Mena mitsoriaka volombolamena na volombarahina ny lokon'io lambalandy hifonosany io. Mety ho am-polo taona maro arak'izany no tsy nokitihina izany lambamena notehirizina anaty harona izany ka nahatonga ny ohabolana hoe "Rovitra an-karona ohatry ny lamban'Andriandoriamanjaka" satria dia mety ho ireo bibikely maro no mamotika ao anaty harona ireo lamba notahirizina.
Ny Andriandoriamanjaka dia mino fa ny asa fanenomana landy dia manambina azy ireo koa mbola maro amin'izy ireo no mbola manenona landy ao Fonohasina sy Ambohidava raha tsy misy manenona intsony ny Andriandoriamanjaka ao Ambohidrabiby;
Amin'ny fotoana famelanan'ny voasaribe eo Ambohidrabiby, dia avy ireo samoina avy amin'ny bibindandy ompian'ny Andriandoriamanjaka mankeo amin'ny felan'ny voasaribe ka nahatonga ny fitenenan'ny olona hoe "Ireny ny loloben'ny Andriandoriamanjaka".
Fady anaovan-dratsy noho izy "tsy tsindrian-kazo lena";
Raha misy olona nanao ratsy aminy no iantsoany tody hoe "Raha mbola Andriandoriamanjaka koa aho..." na "Raha Andriandoriamanjaka ray aho, raha Andriandoriamanjaka reny aho...", dia inoany fa tra-javatra izany olona nanao ratsy izany, koa izany no mahatonga ny Andriandoriamanjaka tsy mamaly ratsy ataon'olona sy tsy tokony hanana alahelo aman'olona
Saika miloko mena ny rindrin-trano ivelan'ny Andriandoriamanjaka;
Marani-tsaina sy tony ary tsy tia miharo ka tsy misy olona vahiny mipetraka eo amin'ny tanàna misy azy;
Natao hitarika eo anivon'ny fiarahamonina ka saika manambina azy ny mitondra fanjakana na mitarika fikambanana; mety aminy koa ny manao asa fitsaboana, dokotera na mpitsabo nentimpaharazana;
Tia mipetraka ho andaniny ary tsy tia manaraka ambokony ;
Amin'ny faritr'Ambohidrabiby, ireo Andriandoriamanjaka no malaza amin'ny fanandroana sy ny ody havandra sy valala, nolovainy tamin'ny mpanjaka Rabiby razambeny izany;
Matahotra mosavy ka na akotry ahahiny andro aza no jerijerenao dia ariany izany;
Resy lahatra fa andriana mandrakizay doria mahazo manjaka ny Andriandoriamanjaka, orimbato nataon'ny mpanjaka Ralambo izany;
Fomba filaza fahiny nanoharan'ny Andriandoriamanjaka ny fiainany. Raha misy Andriandoriamanjaka bevohoka dia "mitsimoka ny amontana" no ilazany azy; raha misy Andriandoriamanjaka niteraka dia "namoa ny amontana" no ilazany izany; raha akaiky ny fotoana fodiamandrin'ny Andriandoriamanjaka iray dia "nalazo ny amontana" no filaza azy; raha nodimandry ny Andriandoriamanjaka iray dia "nanintsana ny amontana" na "maina ny ravin'amontana" no filazany izany;
Be fady ny Andriandoriamanjaka ary mino tanteraka fa manan-kasina izy ireo;
Ary mbola maro tsy voatanisa ireo fomba sy tantara mampiavaka ny Andriandoriamanjaka toy ny nifadiany mihinana osy sy ny maro hafa;
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andriandoriamanjaka&oldid=969739"
Dernière modification le 28 Martsa 2019, à 06:01
Voaova farany tamin'ny 28 Martsa 2019 amin'ny 06:01 ity pejy ity.